जडीबुटी खानुहुन्छ?सावधान:: Naya Nepal
काठमाडौं : काठमाडौंका रामकृष्ण तिवारीलाई केही दिनअघि उनकी पत्नीले पारिजातको पात पकाएर झोल दिइन्। ती महिलाले पारिजातको झोल पिउँदा कोरोना भाइरस लाग्नबाट जोगाउँछ भन्ने सुनेकी रहिछन्। तिवारीले खुसीसाथ दुई गिलास पिए। तर, त्यसपछि उनको शरीरमा एक्कासि रक्तचाप घट्यो।‘शरीरमा ब्लड प्रेसर कम भएर दुई दिनसम्म काम गर्न सकिनँ’, उनी भन्छन्, ‘एउटा समस्या समाधान होला भनेर खाएको, अर्को समस्या पो आइलाग्यो। दुई दिन प्रेसर बढाउनमै खर्च भयो।’यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। धेरै नेपालीले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन भन्दै सुनेकै आधारमा घरेलु औषधि प्रयोग गरिरहेका छन्। कोरोनाकै औषधि भन्दै आयुर्वेद सेवा केन्द्रहरूबाट औषधि लिइरहेका छन्। जब कि विश्वमै कोरोनाको औषधि पत्ता लागेको छैन। हल्लाका भरमा जथाभावी औषधि सेवनले मानिसका विभिन्न अंगमा असर गर्न थालेको विज्ञ बताउँछन्।
कोरोना संक्रमण भएर उपचार गर्न आएका बिरामीमा घरेलु औषधि धेरै प्रयोगले समस्या देखिएको ओम अस्पतालका डा. पर्शु घिमिरे सुनाउँछन्। उनका अनुसार गुर्जो, जेठीमधुलगायत जडीबुटी सेवन गरेका संक्रमितमा कलेजोको समस्या देखिएको छ।‘कोरोना लाग्न नदिन वा लागेपछि निको हुन भनेर जथाभावी औषधि खाएकाले उहाँहरूको शरीरमा समस्या देखिएको छ’, डा. घिमिरे भन्छन्, ‘धेरै बिरामीमा कलेजोको समस्या देखिएको छ। पुरानो समस्या होइन, तुरुन्तै भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कोभिड कि कलेजोको समस्या समाधानमा लाग्ने ? गाह्रो हुने गरेको छ।’ कलेजोबाहेक मिर्गौलालगायत अंगमा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।कोरोना केही होइन, साधारण जडीबुटीले ठीक हुन्छ भनेर वैज्ञानिक प्रयोग नभएका औषधि जथाभावी सेवन नगर्न उनको सुझाव छ। ‘औषधि विज्ञानका अनुसार कुुनै पनि औषधि प्रमाणीकरण भएर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘धेरैचाहिँ हल्लाका भरमा औषधि सेवन भएको पाइएको छ। यसरी औषधि जथाभावी नखाऔं।’ यस्तो किसिमको औषधि जथाभावी प्रयोग गर्न सरकारले रोक्नेभन्दा पनि उत्साहित गरेको उनको ठम्याइ छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका डा. शेरबहादुर पुन पनि विज्ञसँग सल्लाह नगरी जथाभावी औषधि सेवनले समस्या आउने बताउँछन्। ‘औषधिको बेफाइदै छ भन्न नसकिएला’, डा. पुन भन्छन्, ‘तर, सम्बन्धित विज्ञसँग सल्लाह नगरी खानु हुँदैन। औषधिको फाइदा के हो ? बेफाइदा के हो ?थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। आफैं जथाभावी प्रयोग गर्दा अवश्य शरीरमा हानि पुर्‍याउँछ।’कुनै पनि औषधि मात्राभन्दा बढी खाए त्यसको नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ। त्यसकारण हचुवाका भरमा कोरोनाको औषधि भनी सेवन नगर्न उनी आग्रह गर्छन्। ‘भिटामिन त धेरै खायो भने समस्या हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘घरेलु औषधि पनि मात्रा जानेर खानुपर्छ। आधिकारिक व्यक्तिसँग सोधेर खानुपर्छ। नत्र संक्रमितमा यसै समस्या भएको हुन्छ, अर्को समस्या निम्तिन सक्छ।’चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवाल जथाभावी औषधि सेवन गर्न नहुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘घरेलु जडीबुटी औषधिले राम्रो काम गर्न सक्छ। तर, कुनै पनि चिकित्सकको सल्लाहबेगर खानु हुन्न।’
आयुर्वेदका औषधि थोरै मात्रामा खाँदा खासै असर नपर्ने भए पनि धेरै भए असर हुने उनी बताउँछन्। ‘अहिले गुर्जो खाँदा हुन्छ भन्ने धेरैको सल्लाह छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, संक्रमितले छिटो निको हुन्छु भनेर बिहान, दिउँसो जति बेलै खायो भने समस्या हुन सक्छ। उसको कलेजो वा अन्य अंगमा हानि पुर्‍याउन सक्छ।’ त्यसैले आयुर्वेदिक औषधि आधिकारिक चिकित्सकको सल्लाहबेगर प्रयोग नगर्दा राम्रो हुने उनी बताउँछन्।आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र कीर्तिपुरका प्रा.डा. रामआधार यादव आयुर्वेदिक औषधिको ‘साइड इफेक्ट’ नभएको दाबी गर्छन्। ‘हामीले गुर्जो त पहिलेदेखि प्रयोग गरेको औषधि हो’, डा. यादव भन्छन्, ‘यसले हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ।’अनुसन्धान केन्द्रले बनाएको आयुर्वेदिक औषधि कोरोनाका बिरामीलाई दिइरहेको उनी सुनाउँछन्। ‘हामीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि बनाएर खुवाएका छौं’, उनी भन्छन्, ‘रुघाखोकी र अन्य भाइरसलाई पनि यसले काम गर्छ।’ तर आफूले कोरोनाको औषधि नै यही हो भनेर दाबी नगरेको उनको भनाइ छ। उनी आफंैले प्रयोग गर्दा भने सही मात्रामा खानुपर्ने सुझाव दिन्छन्।‘हामीले पढेको ज्ञानका आधारमा बिरामीको उपचार गरेका हौं’, उनी भन्छन्, ‘कोरोनाको यही नै औषधि हो भनेर पूरै दाबी गरेका छैनौं। तर, मुख्य त रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भएकाले कोरानाका बिरामीलाई दिइरहेका हौं।’ उनका अनुसार अनुसन्धान केन्द्रमा २ सय बिरामी उपचाररत छन्।
पुनःगठित मन्त्रिपरिषद्को विशेषता
काठमाण्डाै – मन्त्रिपरिषद्मा आज गरिएको पुनःगठनले केही समययता रिक्त मन्त्रालयले नेतृत्व पाएका छन् ।तीन मन्त्रालयको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आएका छन् । यसैगरी मन्त्रिमण्डलमा व्यापक हेरफेर हुने भन्ने कतिपय अड्कलबाजीलाई यो पुनः गठनले असत्य सावित गरेको छ ।पछिल्लो समयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच मन्त्रिमण्डल पुनःगठन, पार्टी एकताका बाँकी काम, संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा नियुक्तिलगायतबारे दैनिकजसो परामर्श हुँदै आएको थियो ।नेकपाका शीर्ष नेताहरुका बीचमा पनि धेरै नयाँ अनुहारका मन्त्री पठाउने र अधिकांश पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्नेमा विभिन्न कोणबाट छलफल चलेको थियो । गएकाे भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीभित्रको अन्तरविरोध हल गर्दै सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा आवश्यकतानुसार हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही कार्यादेशबमोजिम सरकार र पार्टीका कामलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प पनि नेकपाको पछिल्लो सचिवालय बैठकले गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मौजूदा मन्त्रिपरिषद्मा केही नयाँ मन्त्रीको पदपूर्तिसहित केही मन्त्रालयको नेतृत्वमा सामान्य हेरफेर गर्नुभएको हो । नयाँ जिम्मेवारीमा रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री ओली आफैँले लिनुभएको छ भने उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री रहनुभएका ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।विगतमा विनाविभागीयमन्त्री बनाइएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट जिम्मेवारीसहित मन्त्री तोकिएको यो नयाँ अभ्यास हो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति संयोजकसमेतको भूमिका प्रभावकारीरुपमा निर्वाह गर्नुभएका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउने गरी यो नयाँ जिम्मेवारी दिइएको देखिएको छ ।नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै नेता पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारीसहित मन्त्रिपरिषद्को समग्र कामको संयोजनको भूमिका पाउनुभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
रिक्त अर्थमन्त्रीमा नियुक्त विष्णुप्रसाद पौडेल विगतमा पनि अर्थमन्त्री भइसक्नुभएका नेकपाका महासचिव हुनुहुन्छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई राजनीतिक पृष्ठभूमिको अभावका कारण कतिपय बजेट शीर्षकमा पार्टीभित्रैबाट समेत आलोचना भएका स्थितिमा नयाँ अर्थमन्त्री राजनीतिक क्षेत्रको अनुभवी व्यक्ति हुनुभएको छ ।निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको राजीनामापछि रिक्त सञ्चारमन्त्रीमा यसअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रहनुभएका पार्वत गुरुङले जिम्मवारी पाउनुभएको छ ।उहाँ गएकाे प्रतिनिधिसभामा देशकै सबैभन्दा बढी मतान्तरबाट विजयी हुने दोलखाका सङ्घीय सांसद् हुनुहुन्छ । शहरी विकासमन्त्रीमा नियुक्त कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लामो समय काठमाण्डौ उपत्यकाको पार्टी नेतृत्वमा रहनुभएको थियो । उहाँ पूर्व स्थानीय विकास राज्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । महिलामन्त्री हुनुभएका सिरहाका लीलानाथ श्रेष्ठ पहिलो पटक मन्त्री हुनुभएको छ ।नवनियुक्त मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरी सरकारका प्राथमिकताबारे निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रीहरुको शपथग्रहण बिहीबार हुने जनाइएको छ । बडादशैँपूर्वको यो हेरफेरले पुराना मन्त्रीहरुलाई आत्मबलका साथ काम गर्न र नयाँ मन्त्रीहरुलाई नयाँ उत्साहका साथ कार्यक्षेत्रमा ओर्लन प्रेरणा दिने विश्वास छ ।